Bafuna kuphenywe ngeyokuthandana kothisha nabafundi eSobantu High | News24
Bafuna kuphenywe ngeyokuthandana kothisha nabafundi eSobantu High
ABAZALI abakhathazekile bezingane ezifunda e-Sobantu Secondary School bafuna uMnyango wezeMfundo uphenye kabanzi ngezinsolo zokuthandana kwabafundi nabanye bothisha kulesi sikole.
Laba zali abakhulume nephephandaba i-Echo kepha abangathandanga ukudalulwa amagama abo bathe yize kungumkhuba omdala, sebekhethe ukuphumela obala ngoba bebona ukuthi isimo asishintshi. Bathi noma wenzeka, awenziwa yibo bonke othisha besilisa.
Omunye wabazali okhulume naleli phephandaba uthe yize abafundi bake bazama ukulubika lolu daba kodwa azikho izinyathelo ezake zathathwa.
Uthe: “Ukuthandana kothisha nabafundi into endala kulesi sikole ngoba kukhona nabanye asebaze bahamba kulesi sikole. Kunezingane ezazifunda la esezinezingane nazo ezisolwa kwabanye balabo thisha.
“Besithule ngoba phela kuyinto eyihlazo, kodwa siyabona ukuthi awenzeki umehluko. Ngisho ufika kona uyabona ukuthi ubudlelwano obukhona phakathi kwabafundi nabanye othisha besilisa buhlukile indlela abajwayelene ngayo.
“Uma unengane nje yentombazane efunda khona njengomzali uba novalo ukuthi kuqhubekani. Into esikhathazayo ukuthi noma ngabe kuthiwa izingane zethu ziyazivumela zona, labo thisha babulala ikusasa lazo.
“Sesifuna umnyango ungenelele uphenye kabanzi ukuthi kwenzekani futhi bajeze labo abazotholakala benecala.”
Omunye umzali ongathandanga ukudalulwa uthe kukhona othisha abake bababizela eceleni bebakhuza ngalo mkhuba kodwa kwaba zinhlanga zimuka nomoya.
“Noma kungekho okuphathekayo kodwa kunabafundi abaziwayo endaweni ukuthi bathandana nothisha. Sifisa ukwazi ukuthi ngabe kulungile yini ukuthi abafundi bathandane nothisha futhi leyo nto kube yinto eyenziwa udede ngaphandle kokufihla,” kuphetha umzali.
USihlalo we-SGB yesikole uNkk Zanele Ndlovu uthe banolwazi ngodaba futhi ludluliselwe kumhloli wesekethe. “Njengabazali lona umkhuba esingavumelani nawo. Udaba ludluliselwe emnyangweni wezeMfundo , futhi abayotholakala benecala kuzomele bajeze ngendlela efanele,” ephetha.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu Natal uMnu Sihle Mlotshwa uthe: “Lokhu sikuthatha njengezinsolo ezibucayi. Siyanxusa noma kubani ongaba nolwazi ukuba aphumele obala ukuze sithathe izinyathelo ezifanele. Ukuziphatha ngendlela engavumelekile kungaholela nasekutheni labo abasolwayo balahlekelwe imisebenzi.
“Othisha bangababazali futhi kumele babe yizibonelo ezinhle kubafundi. Akumele kube ibona abagcina sebecuthela izingane ezingenacala.”